‘Tagadzirira kudzoka kwePSL’ | Kwayedza
05 Nov, 2021 - 13:11 2021-11-05T13:29:17+00:00 2021-11-05T13:29:17+00:00 0 Views
VARAIRIDZI vezvikwata zvakasiyana zvinokwikwidza muCastle Premier Soccer League (PSL) vanoti vakagadzirira kudzoka kwemitambo iyo iri kutanga nemusi weMugovera svondo rino zvichitevera makore maviri yakambomiswa senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Svondo rino, kuchange kusingadanwe anonzwa kunhandare dziri kumativi mana enyika uko zvikwata zvichatatsurana mumitambo yePSL yekutanga iyo yakapedzisira kutambwa mugore ra2019 apo FC Platinum yakahwina mukombe uyu kechitatu.
Varairidzi vakaita hurukuro neKwayedza svondo rino vanoti vane mufaro mukuru nekudzoka kwemitambo iyi.
Murairidzi wevakomana vatsva muPSL veCranborne Bullets – Nesbert ‘Yabo’ Saruchera – anoti chikwata chake chagadzirira zvakasimba kusangana nezvimwe zvavakabva nazvo kuDivision One.
Mumutambo wekutanga, Cranborne Bullets ichasangana neChicken Inn kuLuveve Stadium kuBulawayo.
Yabo anoti mitambo yavange vachitamba yeChibuku Super Cup yakabatsira chaizvo kuumba chikwata chake apo chatarisana nemwaka wacho wekutanga muPSL.
“Yazosvika mitambo yatange takamirira kwenguva ndefu. Takatarisira zvikuru svondo rino apo tichatamba mutambo wedu wekutanga wePSL tichisangana neChicken Inn, maGamecocks.
“Zvinhu zvatange takatarisira kwenguva ndefu asi tichikundikana kuzviita nekuda kwedenda reCovid iro range richidzorera mutambo wedu uyu kumashure. Iye zvino tave kutarisira mberi, mutambo wave kutsvuka ropa. Tingave tiri vadiki pazita sezvo tichangopinda muPSL asi tinovimbisa kuti tichatamba nhabvu inonwisa mvura,” anodaro Yabo.
Kuchiti murairidzi weTriangle United – Taurai Mangwiro – anoti kudzoka kwemitambo yePSL kunofadza asi zvakakosha kuti vose vane chekuita nenhabvu varangarire kuti denda reCovid-19 richiriko uye votora matanho ose ekuridzivirira.
“Iyi ndiyo nguva yatange takamirira kubva takaenda palockdown, taingoti nhabvu yedu ichanyatsodzoka rinhi. Iye zvino tine mufaro kuti tave kuchisimudzira mitambo yedu.
“Asi zvakakosha kuti tirangarire kuti Covid-19 ichiriko haisati yapera. Saka patinenge tichitamba mitambo yedu titevedzere matanho ose anodiwa ekudzivirira kupararira kwedenda iri,” anodaro.
Chikwata chaMangwiro mutambo wacho wekutanga wemwaka uno chiri kunanga kuBulawayo uko chichasangana neBulawayo Chiefs. Murairidzi weChicken – Joey ‘Mafero’ Antipas – anoti mwaka wegore rino uchanakidza zvikuru sezvo vatsigiri vange vasuwa nhabvu.
Mafero, uyo chikwata chake cheGamecocks chakaburitswa muquarter-final yeChibuku Super Cup svondo radarika, anoti vachashanda nesimba kuti vagopedza vari pakati pezvikwata zvepamusoro.
“Takatarisana nekudzoka kwemitambo yePSL, mutambo wedu mukuru wenhabvu munyika. Mutambo uyu pawange usingatambwe zvange zvichitirwadza, asi zvakakosha nekuti taive pakaoma senyika nekuda kweCovid-19. Isu tiri kutarisira zvikuru kutanga kwemitambo uye tinovimbisa kuti ticharwa semvumba mumitambo yedu tiyedze kusimudza mukombe watakambohwina 2015. Ndinoziva kuti zvakaoma nekuti tinenge tichikwikwidza nezvikwata zvakasimba,” anodaro Mafero.
Zvakadaro, kune mimwe mitambo iriko svondo rino, Dynamos ‘DeMbare’ inenge iri pamusha apo ichasangana neYadah Stars kuchiti vakaomana veBlack Rhinos vachange vari pamusha zvakare vachitatsurana neHighlanders.
FC Platinum iri kutanga mwaka wayo mutsva iri pamusha apo ichasanganawo nevakomana vachangopinda muPSL veTenax.